नेपाल आज | कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिममा नेपाल (भिडियोसहित)
कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिममा नेपाल (भिडियोसहित)
आइतबार, ०४ फागुन २०७६ गते प्रकाशित - नेपाल आज
भर्खरै नेपाल सरकारले चीनको वुहान शहरबाट १ सय ७५ नेपालीको उद्दार गरी भक्तपुरको खरिपाटीमा राखेको छ । कम्तिमा १४ दिन उनीहरुलाई चिकित्सकको उच्च निगरानीमा राखिने छ ।
उता, चीनमा कोरोना अर्थात कोभिड–१९ संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या दैनिक बढिरहेको छ भने नयाँ संक्रमितहरुको संख्या पनि बढेको बढ्यै छ । एशिया बाहिर पहिलो पटक फ्रान्समा पनि एकजनाको कोरोना संक्रमणबाट निधन भैसकेको छ ।
यो अवस्थामा चीनको नजिकै रहेको नेपालमा कोरोना संक्रमणको त्रास सर्वसाधारणमा फैलिएको छ । सामान्य रुघाखोकी लाग्दा पनि कोरोना त होइन ? भन्ने प्रश्न उब्जिन थालेका छन् ।
कोरोनाको संक्रमण भएपछि उपचार सम्भव छैन, मृत्यु नै यसको विकल्प हो भन्ने धारणा पनि आम मानिसमा छाएको छ । चीनको अवस्था हेर्दा नेपालमा यस सम्बन्धी त्रास झन बढ्ने स्थितिमा पुगेको छ ।
पाटन अस्पतालमा कार्यरत डा. विजय थापाका अनुसार कोरोना संक्रमण हुने वित्तिकै ज्यान जाने भन्ने कुरा विल्कुल गलत हो । ८२ प्रतिशतमा कोरोनाको संक्रमण सामान्य हुने गरेको छ । तातोपानी पिउने र आराम गर्यो भने आफै ठीक हुन्छ । बाँकी १८ प्रतिशतमा भने जटिल अवस्था हुनसक्छ ।
कोरोना संक्रमण हेर्दा रुघाखोकी जस्तै हुन्छ । यसका सबै लक्षण रुघाखोकी जस्तै हुन् । तर, जटिल अवस्था भयो भने श्वासप्रश्वासमा समस्या हुन्छ । आजभन्दा करिब ६० वर्षअघि १९६० मा कोरोना भाइरस पत्ता लागेको हो । पछि बिभिन्न कालखण्डमा बिभिन्न रुपमा यो देखा पर्यो । सार्स, इबोला लगायतका समस्या पनि भाइरसकै कारणले भएका हुन् । समस्यया के भयो भने भाइरसले आफनो रुप फेर्दै गयो । यसकारण यसको निदानमा समस्या उत्पन्न भएको हो ।
कोरोना भाइरस चिसोमा सक्रिय हुने गर्दछ । यसका लागि ४ देखि ६ डिग्री सेल्सियस तापक्रम निकै उपयुक्त हुन्छ । सामान्य काठ र स्टिलमा पनि यो करिब एक महिना बाँच्न सक्छ । तर, उच्च तापक्रममा भने यो बाँच्न सक्दैन ।
अहिले नेपालमा कोरोना संक्रमण फैलिन्छ कि भन्ने जुन डर छ त्यो एक हिसाबले स्वभाविक हो । तर, त्रसित हुनुपर्ने अवस्था छैन । एक त नेपालमा बिस्तारै गर्मी सिजन सुरु हुँदैछ भने अर्कोतर्फ संक्रमण फैलिन नदिने सरकारी र निजीस्तरमा सजगता बढेको छ ।
डा. थापा भन्छन्, ‘कोरोनाको संक्रमण हुन नदिने बेलैमा होशियारी अपनाउनु नै सबैभन्दा बुद्धिमानी हुन्छ । यसका लागि भीडभाडमा नजाने, खोक्दा अर्थात हाच्छ्यूँ गर्दा रुमाल वा हातले मुख छोप्ने, खोकी रहेको मान्छेको नजिक नजाने, हिंडडुल गर्दा उपयुक्त ढंगले गुणस्तरीय मास्क लगाउने, हात राम्रोसंग धुने र कोठामा बस्दा झ्याल तथा भेन्टिलेसन खुल्ला राख्नु पर्दछ ।’